Kutheni ikati yam itya ngomdla? | Amakati eNoti
Kutheni ikati yam itya ngomdla?
UMaria Jose Roldan | | Ukutya, Curiosities
Ixesha lesidlo kufuneka libe lixesha lokuthula lomntu wonke, nokuba banemilenze emibini okanye emine. Kodwa ngamanye amaxesha sidibana nekati ebonakala ngathi ingxamele ukugqiba ukutya kwayo kwaye iqale ukwenza ezinye izinto. Yintoni enokwenziwa kwezi meko?
Xa ikati yam itya ngolangazelelo, ndiyazi ngoku lixesha lokuba nexhala. Akuqhelekanga ukuba nditye kakhulu kwaye ngokukhawuleza. Ukukunceda, kubalulekile ukuba uqale wazi ukuba kutheni usenza loo nto.
1 Kutheni ikati yam itya ngomdla?
1.1 Yayiyinkwenkwe eyinkedama
1.2 Ngaba uphethwe gadalala
1.3 Unexhala ngokwemvelo
1.5 Ukutya okusemgangathweni osezantsi
1.6 Ukukruquka kunye neemvakalelo
1.7 Ezinye izizathu
2 Ungenza ntoni ukukunceda?
Okulandelayo siza kubona izizathu ukuze uqonde ezinye izizathu zokuba ikati yakho inokuba nayo le nto yokutya kwaye yiyo loo nto itya ngolangazelelo.
Ikati engatyiswanga ngunina, ngaphandle kwesizathu, ihlala ikhula inike umbono wokuba ihlala ilambile. Kungenxa yokuba ngelixa siyondla ngebhotile, siyikhusele kakhulu kangangokuba asifuni ukuba ilambe umzuzu omnye, nto leyo esengqiqweni. A) Ewe, Omncinci ukhula esazi ukuba uyakuhlala enokutya kwaye akukho mntu uzakuthetha nantoni na kuye ngokutya, ngenxa yoko uyasisebenzisa.
Nangona kunjalo, umama uvumela amantshontsho ukuba alambe kancinci. Kuya kufuneka uyenze ukuba ufuna bafunde ukukhangela ukutya kwabo bodwa kuba akazukuhlala ecaleni kwakho ngokusisigxina.
Ngaba uphethwe gadalala
Ukuba ekhaya kukho omnye umntu ophilayo (ikati, inja okanye umntu) ongakushiyi wedwa, oko kukuthi, okuleqayo okanye okujongileyo ngalo lonke ixesha, okusoloko kufuna ukukubamba ubomi obuzolileyo obuqhelekileyo bekati, Ingaziva ngathi inexesha elincinci kakhulu lokutya. Xa ekugqibeleni efumana umzuzwana utya ngokukhawuleza kuba uyazi ukuba kungekudala uza kuphinda ahlaselwe.
Iikati ezinomdla badla ukutya ukutya kwabo ngokukhawuleza ngaphezu kwabo bonke abanye, hayi kuba bephila ubomi obubi kodwa ngenxa yokuba benjalo. Kufuneka ube nomonde kwaye uzame ukufumana isisombululo ukunqanda ukukrwitshwa.
Ikati yakho inokuba ithe phithi kukutya kuba ukungondli ngokwaneleyo, kuba ulambile kwaye xa umtyisa uthatha umoya wakhe ukugqiba yonke into.
Inokuba kungenxa yokuba ulambile kakhulu okanye kungenxa yokuba uneekati ezininzi, ngamanye amaxesha ushiywe elambile xa ezinye iikati zityile kumondli wakhe. Ke Kubalulekile ukuba xa unekati enye ekhaya, nganye nganye ine-feeder yayo kunye nomseli wayo.
Mhlawumbi kamva, wonke umntu utya apho wonke umntu atyela khona, kodwa kuya kwanela ukuze wonke umntu atye isabelo sakhe esifanelekileyo kwaye angalambi.
Ngokwesiqhelo iikati zingatya kwimfuno ngaphandle kweengxaki kuba zilinganisela ukutya kwazo kwaye bayayeka xa banelisekile. Kodwa ukuba unekati etyebe kakhulu, kuya kufuneka ulinganise iidosi zokutya.
Ukuba oku kuyenzeka kuwe, kufuneka wazi ukuba iikati zingatya kube kanye okanye kabini ngemini kwaye kuya kubanela ukuba isixa sanele.
Ukutya okusemgangathweni osezantsi
Unokucinga ukuba ndicinga ukuba unika iikati zakho zikumgangatho olungileyo, kodwa enyanisweni ayinazo izakhamzimba kunye neevithamini eziyimfuneko kubo ukuze babe sempilweni okanye bazive bonelisekile kukutya kwabo.
Ukuba kunjalo, ukuba ndicinga ukuba unika ikati yakho ikumgangatho osezantsi, kuyinto eqhelekileyo ukuba ikhangele okanye icele ukutya okungakumbi. Awuyondli kakuhle kwaye ifuna izondlo! Thetha kugqirha wezilwanyana ngengcebiso malunga nesondlo esimenza azive anelisekile kwaye kwangaxeshanye, yinyamekele impilo yakho ngaphakathi nangaphandle.
Amakati afuna iiprotein kunye nokutya okusemgangathweni. Ayinamsebenzi ukuba umncinci okanye umdala, ukutya kufuneka kufanelekile kwiimfuno zakho zomzimba, zengqondo nezemvakalelo.
Ungakukhetha njani ukutya kwekati okugqwesileyo?
Ukukruquka kunye neemvakalelo
Inokwenzeka ukuba ikati yakho ifuna ukutya kuba ikruqukile, okanye inengxaki yeemvakalelo eyaziwa ngokuba "kukuziphatha okungaqhelekanga kwengqondo". Oku kuthetha ukuba ikati yakho ikhoboka ekutyeni, nazo zonke iziphumo ezinokuthi zibenempilo yakho.
Ukuba oku kuyenzeka kuwe Kuya kufuneka umqeqeshe ukuze alungise indlela aziphethe ngayoUkuba kukho imfuneko, kuya kufuneka uthethe nengcali kwindlela yokuziphatha ukuze uqondise le ndlela yokuziphatha. Kodwa oku kuyakwenzeka kuphela xa unempawu ezinje:
Emva kokutya ufuna ukutya ukutya kwezinye izilwanyana kwanokwakho
Tsibela etafileni utye okukuyo
Ubonakala enqwenela xa ubeka ukutya kwi-feeder yakhe
Funa ingqalelo rhoqo kubanini bazo
Itya izinto okanye ihlafune nokuba ayikokutya
Ezi mpawu zibaluleke kakhulu ukuba uzithathele ingqalelo kuba ngale ndlela uya kuba nakho ukwazi ukuba ingaba yile nto yenzekayo kuwe na ukuyilungisa ngokukhawuleza.
Nangona le nto siyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku zezona zizathu ziphambili zokuba ikati itye ngexhala, zikhona ezinye ekungafuneki ukuba sizikhuphe:
Uyakuthanda ukutya kwakheUyonwabele kakhulu kangangokuba akanakunceda kodwa ayingenise ngokukhawuleza njengoko esenza.
Uyagula: Kukho izifo ezithile, ezinje ngehypothyroidism, ukubandezeleka kukungalingani kwe-thyroid okanye isifo seswekile, esineempawu ezibandakanya ukonyuka kokutya. Kodwa akufuneki woyike uninzi lwezi zifo ziyanyangeka.
Ungenza ntoni ukukunceda?
Nje ukuba kufunyaniswe unobangela, lixesha lokuba uthathe amanyathelo. Enye yezinto ezihlala zisebenza kakuhle yile ukuthenga isondli esikhethekileyo sezilwanyana ezixhalabileyo, Ndiyayithanda lento:
Ke encinci Kuya kufuneka usebenze kancinci ukuze ufumane ukutya kwakho, ezokunyanzela ukuba utye kancinci. Kodwa ukongeza, kubaluleke kakhulu ukuba kubonelelwe ngendawo ekhuselekileyo nezolileyo apho angazondla khona ngaphandle kokukhathazeka malunga nantoni na, enje ngegumbi lakho lokulala umzekelo.
Gcina ukhumbula ukuba xa uxhatshazwa kufuneka simisele imida ethile ukuze wonke umntu ekhaya ahlale ngokonwaba. Kufuneka sihloniphe ilungu ngalinye, kungenjalo kuya kuvela iingxaki. Ukuba uyathandabuza malunga nokuyiqonda kakuhle ikati yakho, kwi Oku kubhaliwe Sikunika izitshixo ukuze ubudlelwane bakho bube yinzuzo kuni nobabini.
Ukuba akukho nanye yale nto inceda ikati yakho, ke thetha nodokotela wezilwanyana okanye ingcali kwimeko apho izinto zingaphucuki. Okwangoku, ungazigcina ezi ngcebiso engqondweni:
Yijonge kwaye uchithe ixesha elisemgangathweni kunye nekati yakho
Mnike ukutya okusemgangathweni
Mnike ukutya okumanzi amatyeli ambalwa ngeveki ukongeza kukutya kwakhe okomileyo
Yongeza amanzi okusela kwaye ungapheleli emzimbeni kwaye uzive ugcwele ixesha elide
Gcina iindlela zokutya zemihla ngemihla (umzekelo, kabini ngemini), okanye zinike amaxesha amaninzi emini, kodwa ngexabiso elincinci
Ukuba ucela ukutya, ungamhoyi
Zama ukulungelelanisa amaxesha akho okutya afanelwe nalawo ukuthintela ukungqubana kwesilingo
Sukumnika ukutya okongeziweyo kuba uyamsizela
Ngezi ngcebiso ikati yakho iya kuba ngcono, ngokuqinisekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ukutya » Kutheni ikati yam itya ngomdla?
UMarcelo, eRosario, eArgentina sitsho
Yonke ingcaciso enikwe kule ndawo iluncedo kakhulu: imfutshane, ichanekile kwaye inolwimi oluhle. Enkosi!
Phendula uMarcelo, eRosario, eArgentina
Enkosi ngamazwi akho, Marcelo 🙂.
Amantshontsho atya bodwa eneminyaka emingaphi
Unobangela we-feline alopecia